पीडित प्रश्न – यही हो त न्यायर ?-NepalKanoon.com
पीडित प्रश्न – यही हो त न्यायर ?
असार ३, बैतडी । बैतडीको दुर्गम गाउँकी उनलाई अहिले न्याय निकै कठीन चिज लागिरहेको छ। यसका निम्ति भौतारिने चेष्टासेमत कस्टसाथ भइसक्यो।
‘छोरीमाथि दुस्कर्म गर्नेहरुले सजाय पाउँछन् भन्ने लागेको थियो तर, रिहा पो भए, ‘उनले भने अब कहाँ जाउँ? सर्वोच्च जाने हैसियत छैन।’ परीक्षा दिन गएकी आफ्नी छोरीमाथगि सामुहिक बलात्कार गर्नेहरुलाई पुनरावेदन अदालतले सफाइ दिएपछि उनको मन झन विक्षप्त भएको छ।
बैतडी जिल्ला अदालतले दुई वर्षअघि बलात्कारमा कसुरदार ठहर्‍याई १३-१३ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना सुनाएका दुई युवालाई गत वैशाख १५ गते पुनरावेदन अदालत महेन्द्र नगरले निर्दोस बनाइदिएको खबर आजको कान्तिपुरमा भवानी भट्ट र अगेन्द्र अवस्थीले लेखेका छन्।
जिल्ला अदालतले २०५९ फागुन २२ गते बलात्कार मुद्दामाथिको फैसला गर्दा हदैसम्मको सजाय सुनाउको थियो। जबरजस्ती करणी भनेर जनही ८ वर्ष र सामुहिक जबरजस्ती करणीलाई कारण देखाउँदै थप ५ वर्ष कैद तोकिएको थियो।
२०६९ मा यो घटनाले ठूलै चर्चा पायो। सबुत प्रमाणसहित अभियुक्त द्वय बैतडीकै सागर भट्ट र अमर अवस्थीविरुद्ध चलाएको मुद्दाले पुनरावेदनको फेसलाका कारण नयाँ मोड लिएको छ।
२०५९ चैत ९ गते एसएलसी परीक्षा दिनका लागि बैतडीको पाटनतर्फ गइरहेकी छात्रामाथि सामुहिक बलात्कार भएको थियो। उच्च शिक्षा पढेर परिवारको दुःख कम गर्न सोच पालेकी उनी उक्त घटनाबाट विक्षिप्त रहँदै आएकी छन्। परिवारै ठूलो संकटबाट गुज्रीरहेको छ।चौतर्फी दबाबपछि बैतडी अदालतले बलात्कारमा संलग्न दुईजनालाई सजाय सुनाएको थियो।
समय बित्दै गर्दा पीडा बिर्सदै जान सकिन्छ। तर पीडित छात्राको परिवारले त्यो मौका पनि पाएन, पुनरावेदनको फैसलाले।